CHI QUE DEVAYNE သို့သူမသေဆုံးပြီးနောက်အခွန်ဆက်ပြီးမှမိဖုရားများကိုဆွဲဆောင်သည် - သတင်း
Drag Queens သည်သူမသေဆုံးပြီးနောက် Chi Chi DeVayne အားဂုဏ်ပြုခဲ့သည်
RuPaul ၏ Drag Race ကြယ်ပွင့် Chi Chi DeVayne သည်ကျန်းမာရေးစစ်ပွဲအပြီး ၃၄ နှစ်အရွယ်တွင်မနေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောနာမကိုအမှီသူ Chi Chi, Zavion မိုက်ကယ် Davenp သို့မဟုတ် t ဖြစ်ခဲ့သည် ရောဂါ scleroderma နှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင်နှင့်သံသယကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ရောင်မှုအတွက်မကြာသေးမီကဆေးရုံထဲမှာနှင့်ထွက်ခဲ့သညျ။
သူမ၏မိသားစုတစ် ဦး အတွက်သူမ၏အသေခံအတည်ပြုခဲ့သည် ကြေညာချက် မနေ့ကထုတ်ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုသည်ကမ္ဘာကျော် Chi Chi DeVayne မှချစ်မြတ်နိုးသောသား Zavion Michael Davenport သေဆုံးကြောင်းကြေငြာမိသည်မှာအလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းပါ။
မျှဝေသည် အဘယ်သူသည် DeVayne သူကားအဘယ်သူ (@chichidevayneofficial) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀ ရက်၊
Chi Chi သည် 2016 ခုနှစ်တွင် Drag Race တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူမသည်စတုတ္ထမြောက်လာခဲ့ပြီး Dreamgirls '၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထပ်တူပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Chi Chi သည်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် All Stars တွင်ထင်ရှားခဲ့ပြီးသူသည်အeight္ဌမနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့သည်။
သူမသေဆုံးသည့်သတင်းကိုကြားရသောအခါဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိဖုရားများစွာသည် Instagram နှင့် Twitter ပေါ်တွင်သူမအားချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ RuPaul သည်သူမ၏ဖြတ်သန်းမှုနှင့် GLAAD အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Chi Chi DeVayne ၏အခွန်အချို့သည်ဤတွင်သာဖြစ်သည်။
VH1 ကိုယ်စား World of Wonder နှင့် RuPaul's Drag Race ၏သရုပ်ဆောင်နှင့်အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးစာနာမှုကိုကျွန်ုပ်မိသားစုမှသည်သူမသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ' –RuPaul (၂/၂)
- RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
industry အထင်ကရဘုရင်မကြီးစာသားငါတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိလူတိုင်းကအမြဲချစ်ကြလိမ့်မည်။ pic.twitter.com/UspJ3KzQaC
- Trixie Mattel (@trixiemattel) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
- Bianca Del Rio (@TheBiancaDelRio) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chi Chi DeVayne ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ အမှန်တကယ်လွဲချော်ခံရမည့်မယုံနိုင်လောက်သောစွမ်းရည်နှင့်အနုပညာရှင်။ Chi Chi၊ ပါဝါအနားယူပါ။ ❤️ pic.twitter.com/WMlUQtuv5r
- ကနေဒါနိုင်ငံ၏ Drag Race (@canadasdragrace) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chichi ကိုတီဗွီမှာကျွန်တော်စတွေ့တုန်းကတစ်နေ့ကျရင်ငါလည်းအဲဒီမှာရှိမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုပန်ကာအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ပြီးမျက်ရည်များကျခဲ့ရသည်။ သူမသည်ငါ့ကိုဖက်, ပြီးတော့ကျနော်တို့ဆေးလိပ်သောက်! အဲဒီအချိန်ကတည်းကငါတို့အတူတူခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်သူမ၏အစ်မခေါ်ခြင်းငှါအခွင့်ထူးပါပဲ။ Zavion ဟာအမြဲတမ်းလွဲချော်သွားမှာပါ။ pic.twitter.com/JTK3eRKzVF
- The Vixen (@TheVixensworld) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
- Yuhua Hamasaki (@YuhuaHamasaki) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chi Chi Devayne သည်သူမ၏ရာသီနှင့်နောက်ပိုင်းကာလများ၌ထိုသို့သောအလင်းရောင်ရှိခဲ့သည်။ သူမသည်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချမှု၊ ရိုးသားမှုနှင့်သင်၏စစ်မှန်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကသင့်ကိုဝေးကွာသွားစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူမဟာစစ်မှန်တဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ #RIPChiChiDevayne pic.twitter.com/Q0VGgyCngr
- Cheryl Hole (@CherylHoleQueen) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ငါမင်းကိုချစ်တယ် love Chichi pic.twitter.com/woKZv7z7EB
- Alexis Mateo (@ AlexisMateo79) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chichi နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးမိဖုရားတစ် ဦး ကိုလက်ချလိုက်တယ်။ S9 ကိုရိုက်ပြီးပြီးချင်းသူမကိုပထမဆုံးတွေ့တယ် အဆိုးဆုံးတုံးကိုကျွန်တော်သောက်လိုက်တယ်။ သူမငါ့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တယ်။ Xmas ခရီးစဉ်မှသူမနှင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ဥာဏ်အားလုံးသည်ထာဝရကာလ၌ရှိလိမ့်မည် အမွှေးအကြိုင်တန်ခိုး၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေ
- Farrah Moan (@farrahrized) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chi Chi သည်အမှန်အားဖြင့်ထောက်ခံမှုအများဆုံးမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သူမ၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုသင်၏အတွေးများတွင် ထား၍ သူမအတွက်ပုံသက်သေကောင်းသည့်ကြင်နာမှုအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ငါတို့အားလုံးမင်းကိုချစ်ပြီးမင်းကိုလွမ်းလိမ့်မယ် pic.twitter.com/pOLjEN5pPJ
- Aquaria (@aquariaofficial) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ကောင်းပြီ၊ ငါ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်ကိုတက်လိုက်ပြီ၊ ငါ့ဘုရား ... ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ပြီးလုံခြုံအောင်ထားပါ။ sisterchrestil ကို @chichidevayneofficial မှာချစ်တယ်
မျှဝေသည် သုံးပါးတစ်ဆူငွေကျပ်အရိုးစု (@trinitykbonet) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀ ရက်၊
ခုတော့ငါ့နှလုံးသားတွေကကွဲနေပြီ .. ငါတောင်သူမမြင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုအမြဲ chichi ချစ်ကြတယ်။ ငါ့ကခုန်ကောင်းကင်တမန်
- ကနေဒီဒီဗင်ကူးသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Dancing Diva (@kennedyddoftx) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
နှလုံးကြေကွဲခြင်းမစတင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောချိုမြိန်။ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအစ်မကိုဆုံးရှုံးရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ChiChi RIP pic.twitter.com/kv0qGDPvym
- Jinkx မုတ်သုံလေ (@JinkxMonsoon) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၁ ရက်
RIP ကောင်းကင်တမန် https://t.co/FVxys8481i
- ကတေး (@katya_zamo) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်! သူမသည်စာသားအရကြင်နာတတ်သူဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်
- Trinity The Tuck (@TrinityTheTuck) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chi Chi ကငါ့ကိုအရမ်းကြင်နာခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ကငါတကယ်နိမ့်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာမျက်ရည်ကျထိုင်နေသည်ပေါ့။ R.I.P သင်သည်လှပသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။
- Baga Chipz (@ChipShopBird) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
RIP ChiChi ဘာလဲအစွမ်းထက်တဲ့ဝိညာဉ်၊ အလင်းရဲ့အလင်းရောင်ကဆက်လက်တောက်ပနေလိမ့်မယ်
- Blu Hydrangea (@BluHydrangea_) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
- Courtney အက်ဥပဒေ (@courtneyact) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ကမ္ဘာကြီးသည်စစ်မှန်သောနှလုံးသားဖြင့်စစ်မှန်သောမိဖုရားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် #ChiChidevayne
- အနီရောင်မနာလိုမှု (@ScarletEnvyNYC) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
Chi Chi အားဂုဏ်ပြုရန်ဒုတိယအကြိမ်ယူပါ။ သူမဘာကို The Tea's အကြောင်းပြောတာကိုနားထောင်ပြီးလုံးဝမုန်းတီးခံရတာကိုမှတ်မိသေးတယ်။ အရမ်းအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ pic.twitter.com/wm3iDG21Xl
- Crystal | လူမည်းဘဝကိစ္စ (@crystalwillseeu) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ပါဝါအနားယူပါ။ ၏သွားတာ၏ကြားဖို့ဒီတော့ဝမ်းနည်းဖွယ်နှင့်ကြေကွဲဖွယ် #chichidevayne သငျသညျအစျကိုကိုချစ်ခြင်းနှင့်လွဲချော်ပါလိမ့်မယ်! ❤️ pic.twitter.com/sYEIRMZ5u9
- Heidi N Closet (@HeidiNCloset) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
ငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာအနားယူပါ #chichidevayne ငါနှလုံးကြေကွဲနေတယ်
- Roxxxy Andrews (@RoxxxyAndrews) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၀
• ဒါကြောင့်သင် Drag Race နှင့်အတူစွဲလမ်းနေထင်ကြသလော ဒီဉာဏ်စမ်းပဟေinိထဲမှာအမှတ်ပြည့်ကိုရယူပြီး၎င်းကိုသက်သေပြပါ
• အစဉ်အမြဲအားလုံး 36 ၏အများဆုံးမမေ့နိုင်သော RuPaul ရဲ့ Drag Race အချိန်လေး
• ဤရွေ့ကား 19 အရူးထုတ်လုပ်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များ RuPaul ရဲ့ Drag Race ရိုက်ကူးဘယ်လိုအတိအကျထုတ်ဖေါ်